Dharka Cuba, waa maxay dharka Cuban-ka caadiga ahi? | Safarka Absolut
Si aad u yar safarka cuba dabcan waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay inaad tixgeliso marka lagu daro tikidhada diyaaradaha, hoyga, meelaha xiisaha leh, iwm.
La dharka cuban Aad ayey muhiim u tahay maahan oo keliya maxaa yeelay waddankani waa waddan leh cimilo diiran, laakiin maxaa yeelay waa wax lagu yaqaan oo wakiil ka ah dadka Cuba.
1 Dhar noocee ah ayaa la gashadaa Cuba?
2 Dharka Cuban ee caadiga ah ee dumarka
3 Dharka Cuba haddii aad nin tahay
4 Sida loogu labisto xafladaha Cuba
Dhar noocee ah ayaa la gashadaa Cuba?
Waxaa la oran karaa "Summad dhaqameed" Heerka dharka ee Cuba wuxuu ka kooban yahay dhar caadi ah oo ka sameysan cudbi. Iyo sidii aan horeyba u soo sheegnay, inaad tahay waddan leh cimilo kulul, dharka raaxada leh iyo kan fudud ayaa ugu habboon. Taasi waa, waxaa ugu wanaagsan in la doorto dharka ka samaysan nalka iyo dharka dabiiciga ah sida linenka iyo cudbiga sidoo kale.
Jeans iyo funaanado ayaa ku habboon wakhti kasta oo sannadka ah marka laga reebo bisha Ogos, oo cimiladu kulushahay oo qoyan tahay. Waa inaad maskaxda ku haysaa in jasiiradda ay qaboojiso dabaylaha alder ee si joogto ah u dhaca, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad xirxirto funaanad fudud ama shaati gacmo dheere ah habeennadan qabow.
Sidoo kale waa muhiim inaad ka fiirsato taas Makhaayadaha Cuba qaarkood ma oggolaan karaan xirashada dharka gaagaaban. Sidoo kale xisaabta ku darso in waddooyinka iyo jidadku yihiin kuwo aan sinnayn, taas oo macnaheedu yahay inaad u baahan tahay kabo raaxo leh oo aad ku booqato meelaha xiisaha leh.
Qaarkood kabo fidsan ama kabo xarrago leh Waxay ka shaqeyn doonaan si ka fiican kabaha isboortiga maaddaama tan dambe cagahaaga ka ilaalin karto. Ugu horreyntii, waxaa marwalba lagugula talinayaa inaad keento shaashaddaada qorraxda iyo sunta cayayaanka celisa, iyo sidoo kale musqulaha, waxyaabaha nadaafadda dumarka, iyo waliba qurxinta. Tani waa sababta oo ah iyagu badanaa qaali ayey ku yihiin jasiiradda.
Dharka Cuban ee caadiga ah ee dumarka
Dabcan, dharka Cuba ee ay haweenku xirtaan waa ka duwan yahay wixii ay ku xiran lahaayeen magaalo sida New York tusaale ahaan. Sidaa darteed, haddii aad qorsheyneyso inaad u safarto Cuba oo aad ku raaxeysato joogitaankaaga inta ugu buuxda, iska ilooba kabaha dhaadheer oo xulo xirashada kabo fidsans, sandals ama ballerinas raaxo leh.
Hoteellada iyo maqaayadaha, haweenku inta badan waxay u labistaan ​​casho dhar fudud oo aan ciriiri lahayn iyo kabo sandal ah, wax aad u raaxo leh habeennada diiran ee magaalooyinka sida Havana. Sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho gabal aad u badan oo loo yaqaan 'pashmina' kaas oo la gashan karo dusha sare ee dhar kasta, oo lagu daro dahabka dharka.
Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee laga fiirsado ayaa ah in Cuba ay ka jiraan kaniisado badan, kaniisado iyo xarumo diineed. Sidaa darteed, haddii aad qorsheyneyso inaad booqato meelahan, waa fikrad fiican inaad garbahaaga iyo lugaha deddo si aad ula jaanqaadi karto nooca dharka ee Cuba la isticmaalo inta badan.
Dharka Cuba haddii aad nin tahay
Ragga dharka caadiga ah ee Cuba waa "Guayabera". Waa dhar caan ah oo dhaqameed jasiiradda ku yaal, oo u taagan in lagu sameeyo dunta, inta badan caddaan iyo sidoo kale naqshado ama shaashad siineysa qaab u gaar ah. Waxaa jira gacmo gaab gacmo gaab ah iyo gacmo dheere, dhammaantoodna waxaa lagu xiraa bannaanka surwaalka.
Badanaa waxay ku leeyihiin laba ama ilaa afar jeeb oo xagga hore ah, iyo sidoo kale laba saf oo feedho ah oo feedhaha ah, iyo sidoo kale saddex dhabarka iyo badhannada. Waxaa lagu heli karaa midabbo kala duwan, laakiin guayabera cad ayaa ugu caansan maxaa yeelay waa raaxo, cusub oo iftiin leh. Ragga Waxaad isku dari kartaa dharkan Kuubaanka ah linen ama surwaal fud fudud, oo leh nooca moccasin kabaha xiran ee hooska iftiinka, doorbidaya munaasabadaha rasmiga ah.
Sida loogu labisto xafladaha Cuba
Dhaqan ahaan, xafladaha iyo dabaaldegyada ayaa aad ugu badan Cuba. Inta badan sanadka sanadka dabaaldegyo badan ayaa la xusaa dabcan waxaa had iyo jeer jira xaflado gaar ah, aroosyo, wadajirka koowaad, iwm. Haweenku way xiran karaan dhar dhaqameed rumba si aad ula kulanto ruuxda dhabta ah ee baashaalka iyo midabka habeenada Cuba. Sidoo kale waa wax iska caadi ah nooc ka mid ah dharka Cuba in la isticmaalo, taas oo kiiskan uu yahay nooc dhaqameed oo dhar ah oo loogu tala galay dumarka inta badan loo isticmaalo xafladaha iyo xafladaha kale.
Muuqaalka astaamaha ee dharka Cuba waa midabka, taas oo joogta gaar ahaan dharka dumarka. Laakiin sidoo kale waxaad ka heli kartaa dhar, inta badan shaatiyadaha midabada kala duwan ee ragga. Sida qalabka, koofiyadaha gaaban ee ragga loogu talagalay waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa iyadoo lagu darayo guayabera iyo surwaal linen ah. Haweenka badanaa waxay xirtaan dhar dhaadheer oo qabow oo raaxo leh.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa inaad markasta maskaxda ku haysaa in dalkani yahay waddan leh cimilo diiran sannadka intiisa badan. Sidaa darteed, safarka cubaWaxaa lagugula talinayaa inaad xirato dhar ku habboon si aad ugu raaxeysato joogitaankaaga jasiiradda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dharka Kuuba, dharka Cuba
Maryan Rose dijo
Haye, waxaan qorsheynayaa inaan ka safro Argentina ilaa Cuba dhamaadka bisha Maarso, bilowga Abriil, 13 maalmood ... Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado dharka iyo dharka ay tahay inaan xirto .... Aad ayaad u mahadsan tihiin
Jawaab maria rosa
mar mar dijo
Waxay iga caawineysaa shaqo wax ku ool ah ... MAHADSANID
Ku jawaab biank mar
Hooyo sawirro dhab ah ayey dhigatay. Qofna ma xidho halkaas sida sawiradaas
Barkadaha dabiiciga ee ugu wanaagsan Madrid